Ukudla kwe-Organic | Ukudla nokuphuza | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Ukudla okungokwemvelo kungathengwa esitolo sokudla sezempilo noma kwisitolo sokudla sezempilo
Izinkinga eziningi ze-metabolic kanye ne-sequelae yazo ziwuphawu lokuphila kwethu kwanamuhla. Labo abafuna ukukugwema, qaphela ukuqeqeshwa okwanele, isikhathi sokuphumula nokudla okunempilo, ngokuqinisekile ngokudla okuphilayo.
Ukudla kwe-Organic kanye nendima yayo ekudleni
Esikhathini esilandelayo, ukudla okuphilayo kudla indima ebalulekile. Banikela umzimba ngamavithamini abalulekile, amaminerali nezinto ezibalulekile ezingenakukwazi ukuzikhiqiza noma ukuzikhiqiza ngokwengxenye.
Ukudla kwe-organic kuthanda kabili njengokuhlwa okumnandi
Lezi, futhi, zihlukunyezwa ngokugqamile komzimba obangelwa ukucindezeleka, ukucindezeleka ngokomzimba nangokwengqondo noma ukuntuleka kokuzivocavoca, nokusiza ukugcina amaseli asebenza isikhathi eside.
Phakathi kwezinye izinto, izifundo ezihlukahlukene zesayensi ngezimbangela zokuthuthukiswa kwe-osteoarthritis zifakazela ukuthi ukukhethwa okuhlosiwe kokudla okuphezulu okusetshenziselwa ukudla okusetshenzisiwe kuyasetshenziswa ekuvimbeleni.
Ukudla kwe-Organic kungaba yile mikhiqizo izithako ezivela ekulimeni okulimalayo. Igama elithi ukudla okuphilayo livikelwe ngumthetho ngaphakathi kwe-European Union.
ukudla okukhiqizwe ngendlela engokwemvelo
Imikhiqizo ye-Organic ayiphathwa ngama-pesticides, ama-fertilizer okufakelwayo noma umcengezi wamanzi okugcoba futhi awafakelwa izakhi zofuzo. Ukufakelwa kwemithi kanye nokulawulwa kwezinambuzane kwenziwa kuphela ngezindlela eziphilayo, isibonelo nge-nettle.
Imikhiqizo yezilwane, okungase ithwale isikhathi sokudla okuphilayo, imithethonqubo eyanele isebenza. Lokhu kudinga inhlalakahle yezilwane, elawulwa ku-EC Organic Regulation ye-2007. Ama-antibiotics akufanele asetshenziswe ngokuzithandela, kodwa kuphela ezimweni ezithile. Ekulungiseleleni kokudla kuhlinzeka ngemisebe evuselelayo. Izithasiselo ezifana nama-dyes nama-preservatives azisebenziswanga ekukhiqizeni.
Ubani ofuna ukuthenga ukudla okuphilayo, ukhethe lezo mikhiqizo ezimakwe nge-bio-seal. Lokhu kwaziswa eJalimane ngonyaka we-2001. Iqinisekisa ukuthi imvelaphi yemvelo isukaphi.
Ngaphezu kwalokho, abalimi abaningi abahlinzeka ngempahla bahlinzeka ngokuthengisa okuqondile ngokusebenzisa isitolo epulazini elisendlini. Abanye babo bathengisa imikhiqizo yabo nge-intanethi, banikeza izitolo ezinkulu zesifunda, izindawo zokudla noma umthengi wokuphela.
Ukudla okungokwemvelo kwezempilo yakho
Ukudla okuhlinzekwa njengokudla okuphilayo akudingeki ukuba kube ukudla okuphilayo njengoba umkhiqizi akudingeki ahlangabezane nazo zonke izidingo ze-EC Organic Farming Regulation. Noma kunjalo, abahlinzeki cishe banesithakazelo kumazinga aphezulu aphezulu.
Izinkampani ezincane ezikhiqiza imikhiqizo yezinto eziphilayo ngokuvamile zihlukanisa nelebula eliphilayo ngoba inani lomkhiqizo kanye nezindleko zokufaka isicelo ngeke zilingane. Abaningi bezitshalo zokuzilibazisa banesithakazelo ezitshalweni eziphilayo nezitshalo zemifino.
Kodwa-ke, imvelo ayihlobene kuphela nekhwalithi yemikhiqizo, kodwa futhi inokusimama. Izitezi ziyazuza ekusetshenzisweni kwemvelo. Ekulimeni okuvamile, cishe kusetshenziselwa umquba wokufakelwa, okumele ukwandise kakhulu isivuno sezithelo.
Kodwa-ke, ibheka ukuthi iminyaka eminingi yokuxhaphazwa isebenza. Inhlabathi iphuma, ayinakho izakhi ezibalulekile ukuze i-microclimate enempilo iphinde inikezwe izitshalo. Ikakhulukazi, i-magnesium yamaminerali ilahlekile kubo. Kodwa wena utshayela ngokuningi nge-potassium.
I-pH iphuma ngokulinganisela. Ngesinye isikhathi empilweni enjalo yasemhlabeni awusenakwenzeka. Ngolunye uhlangothi, ngokulima, ulalela ibhalansi phakathi kwezakhi. Uma kunesidingo, ukuvuselelwa kabusha. Izitshalo ngokuvamile ziphansi kunezolimo ezivamile. Izitezi zingasetshenziswa iminyaka eminingi.
Uma kuziwa ekusimeni, izindleko zokuthutha ukudla nazo zidlala indima ebalulekile. Labo abathengisa imikhiqizo yabo endaweni bafaka isandla ekuvikelweni kwemvelo. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi ukuthenga ikakhulukazi imifino yonyaka ngezilimo eziphilayo ezungeze ekhoneni.
Lezi zivuthiwe ngokugcwele ngesikhathi sokuvuna, kanti ukudla okuvamile kuvame ukuvunwa kakhulu kakhulu ukuze usinde ngokungahambi kahle nohambo olude. Okuqukethwe okunomsoco kokudla okuphilayo okuvela esifundeni kufanele kube izikhathi eziningi eziphakeme kunemikhiqizo yangaphandle.
Ukukhiqizwa kokudla okuvamile kungabizi futhi kudla isikhathi esilinganiselwe uma kuqhathaniswa nenhlalakahle yezolimo kanye nenhlalakahle yezilwane. Lokhu kungabonakaliswa, phakathi kokunye, isimo sengqondo sokubulawa kwezinkomo. Ngaphandle kokuvimbela ukusetshenziswa kwama-antibiotics, ukulahlekelwa kwesifo sonke kungenzeka.
Labo abagwema ekusetshenzisweni kwama-hormone okukhula kumele banciphise imfuyo isikhathi eside. Uma izindlela zokwelapha zisetshenziselwa ukwelapha izifo, ngokuvamile kuthatha isikhathi eside ukusebenza. Okokugcina, isivuno esiphezulu asikwazi ukutholakala enhlabathini ehlelwe ngendlela efanele. Zonke lezi zici zithonya izindleko zokudla okuphilayo.
Ukudla okungokwemvelo kufanele kube kubi kakhulu uma kuqhathaniswa nemikhiqizo evamile, ukuze umlimi ophilayo aphile kahle. Nakuba amakhasimende amaningi manje anakekele ukuthi imvelaphi yokudla, iningi lazo likhetha izintengo ezisezingeni eliphansi.
Ezimweni ezimbalwa izici zezezimali zenza ukuthengwa eshibhile. Kunalokho, ukukhetha okungenangqondo kwemikhiqizo lapho kuqala kufika inani. Lokhu akukona nje imiphumela emibi ekukhona kwabalimi abaphilayo. Futhi impilo yomuntu ngamunye kanye nemvelo ihlupheka. Kusemuntwini ngamunye ukwenza umthelela osebenzayo empilweni yabo siqu nokufaka isandla ekusimeni kwezwe lethu.
Ikhasi lokubala lokuphuza ikhofi | udle
Ikhasi lokubala lokuphuza iwayini | udle